Youtube Video ကို Download လုပ်ချင်တဲ့ Software | အဖြူရောင် ကောင်းကင်
Link of Site
Myanmar Actor&Actress Site:
Archives Select Month November 2010 (1) September 2010 (24) August 2010 (2) July 2010 (2) May 2010 (1) April 2010 (36) March 2010 (14) February 2010 (15) November 2009 (2)
Learn other Language
The X dream
windown Install Youselt
AVs For You
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မွေးနေ့ပါ။
Youtube Video ကို Download လုပ်ချင်တဲ့ Software
July 31, 2010 — chiteainmet
Download နှင့် Convert တပြိုင်နက် ပြုလုပ်နိုင်သော Wondershare Youtube Downloader 1.3.10
Youtube Video များသာမက အခြား Online Streaming Flash Video များကိုပါ Download လုပ်နိုင်သည့် Wondershare Youtube Downloader 1.3.10 ဖြစ်ပါတယ်။ Skin Design သစ်လွင်လှပပြီး၊ Flash Online Video များကို လွယ်ကူစွာ Download လုပ်နိုင်ရန် Auto Detect လုပ်ပေးပါတယ်။ Youtube Video များအပြင် Google Video, Yahoo Video, MataCafe နှင့် အခြားOnline Flash Video များကိုလည်း Add URL Button ကို Click နှိပ်ခါ URL လိပ်စာထည့်ပြီး၊ လွယ်ကူစွာ Download လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းအပြင် Download လုပ်ပြီးသာ Video များနှင့် Local Drive မှ Video များကို အခြား Video Format များသို့ပါ တိုက်ရိုက် လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်။ Build In Video Player ပါပါဝင်ပြီး၊ Full Screen Mode ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Download လုပ်ပြီးနောက် File ကိုပြန်ဖြည်ခါ Install လုပ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် Download File တွင်ပါဝင်သော Serial Text File မှ Registration Email နှင့် Serial Key များကိုထည့်ပေးခါ Full Version ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ 7.8 MB သာရှိပြီး၊ Window အာလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
HotFile မှ Download လုပ်ရန်
Uploading မှ Download လုပ်ရန်
Posted in ဆော့ဖ်ဝဲ. LeaveaComment »
« အံ့သြဖွယ်ရာ မြွေကြီးရဲ့ ယဉ်ပါးမှု
Listen To me!! »
* ဖတ်စရာတွေ * (1)
Civil News (1)
WebSite Collect (1)
ပထမဆုံး လက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိဘဲ လေယာဉ်မောင်းသူ
ကွန် ပြူ တာကို automatic timer နဲ့ဖွင့်ရန် နည်းလမ်း
Foder တစ်ခုကို Password ပေးနည်း
ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ၄ ဦး လူမှုရေး လုပျခှငျ့ ပိတျပငျခံရ
သင့် PC အရမ်းလေးနေတယ်ဆိုရင် !
အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီလမှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ ပြေတီဦး အတည်ပြု
မိုးကုတ်ဆရာတော် (၁၉၅၄)မှ တရားတော်များနာယူနိုင်
* ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါး *
မှတ်သားဖွယ်ရာကရင်နေ့ထူးများ * ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့-ပြာသိုလဆန်း ၁ရက်နေ့* ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့-ဇန်န၀ါရီလ 31ရက်နေ့* ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ့-ဖေဖော်ဝါရီလ 5ရက်နေ့* ကရင်အမျိုးသားနေ့-ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်နေ့* ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနေ့- ဧပြီလ 5ရက်နေ့* ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနေ့-မေလ 23ရက်နေ့* ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နေ့-ဂျူလိုင် 5ရက်နေ့* ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် မတော်နေ့-ဂျူလိုင် 16ရက်နေ့* ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ---သြဂုတ်လ 12ရက်နေ့* ကရင်ချည်ဖြူဖွဲ့ (လက်ချည်ပွဲ)နေ့-၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ 